Alshabaab oo Isaga baxday Deegaano ka tirsan gobolada Baay iyo Bakool ka dib markii – SBC
Alshabaab oo Isaga baxday Deegaano ka tirsan gobolada Baay iyo Bakool ka dib markii
Baydhabo- Sida ay ku waramayaan wararka ka soo baxaya gobolada Baay iyo Bakool waxaa deegaano ka tirsan goboladaasi isaga baxay maamuladii xarakada Alshabaab ee halkaasi ku sugnaa mudooyinkii ugu dambeeyay .
Ka bixitaanka deegaano ka tirsan Gobolada Baay iyo Bakool ee xarakada Alshabaab ayaan la xaqiijin Karin ilaa iyo hada, laakiin waxaa jira dhaq dhaqaaqyo ciidan iyo isku diyaar gareen duulaan lagu qaado goboladaas oo ay wadaan ciidamada DKMG ah iyo kuwa Ahlusuna ee iyagu halkaasi ku sugan.
Saraakiil ka tirsan ciidamada DKMG ah iyo kuwa Ahlusuna ayaa saacadihii ugu dambeeyay saxaafada u sheegayay in ay duulaan ku yihiin deegaanada ugu soo horeeya ee ay xarakada Alshabaab kaga sugantahay gobolada Baay iyo Bakool.
Deegaanada Bardaale iyo Waajid ayaa ka mid ah goobaha ay faarujiyeen ciidamada iyo maamulkii xarakada Alshabaab oo iyagu halkaasi ka ariminayay, sidaasi noo xaqiijiyay qaar ka mid ah dadka degan deegaanadaas .
Waxay Sidoo kale dadka degen deegaanadaas sheegeen in ay si aad ah uga cabsi qabaan in saacadaha soosocda ay dhacaan dagaalo u dhexeeya dhinacyada taabacsan Dowlada KMG ah iyo xarakada ALshabaab .
Sikastaba ha ahaatee xiisadahan dagaal ee ka soo cusboonaaday gobolada Baay iyo Bakool ayaa waxay qeyb ka yihiin dagaalada ka soconaya qeybo badan oo ka mid ah dalka kuwaas oo dhexmaraya labada dhinac ee DKMG ah iyo Xarakada Alshabaab.
Apriil 30, 2011 at 5:36 pm
waa xiligoodii xarakaadka ay faaruqin jireen